Barea de Madagascar: namerina ny tanjaka ireo mpilalao | NewsMada
Barea de Madagascar: namerina ny tanjaka ireo mpilalao
Niatrika fanazarantena avy hatrany, tetsy amin’ny kianja Malacam, ireo mpilalao «expatriés» enina mirahalahy tonga voalohany, handrafitra ny Barea de Madagascar. Mpilalao efatra avy amin’ny Cnaps Sport kosa no nanampy azy ireo, tamin’izany.
Nanomboka, omaly maraina, tao amin’ny kianja Malacam Antanimena, ny fanazarantenan’ireo mpilalaon’ny Barea de Madagascar. Mpilalao 10 mirahalahy ihany ny nanatrika izany ka avy any Frantsa ny enina: i William Gros, i Debakely, i Bôlida, i Metanire, i Faneva Ima, i Marco, sy i Toby sy i Leda ary i Ando, miampy an’i Boura, mpilalao avy amin’ny Cnaps Sport. Nifantohan’ny fanazarantena, nampanaovin’i Nicolas Dupuis, tamin’io andro voalohany io, ny famerenana ny tanjaka ho an’ireo mpilalao.
Nitohy teny amin’ny Futsal Andraharo izany, omaly tolakandro, ka fihaonana teo amin’ireo mpilalao samy mpilalaon’ny Barea ny natao. “Tsy misy resaka taktika natao aloha satria tsy mbola feno ny ekipa. Any amin’ny alarobia any vao manomboka mametraka ny paikady hoentina miatrika an’i Sénégal”, hoy i Nicolas Dupuis, mpanazatra. Tonga omaly kosa i Mario, mpilalaon’ny Fosa Jr, rehefa avy niatrika ny “Poule des as”. Maratra kosa i Baggio ka tsy ho anisan’ireo hiatrika ny fanazarantena.
Efa tonga ireo mpila ravinahitra avy any ivelany…
Nigadona, omaly alatsinainy ihany koa, ireo “expatriés” sasany, toa an’i Bapasy, i Njiva, i Dabo, i Dimitri, i Paulin, i Thomas Fontaine. Amin’ity talata ity kosa vao ho avy i Carolus sy i Zotsara ary rahampitso alarobia i Jérome Mombris sy i Ibrahim Hamada.
Marihina fa hitohy isa-maraina ao amin’ny kianja Malacam ny fanazarantenan’ny Barea ary eny amin’ny kianjaben’i Mahamasina, ny hariva manomboka amin’ny 4 ora.
Tsiahivina fa nanomboka ny fampivondronana tany Paris, omaly, ihany koa ny Lionan’i Téranga avy any Sénégal. Raha tsy misy ny fiovana, amin’ity talata ity izy ireo no hanainga ho aty Madagasikara.